I-CNG yezoThutho noGcino-Beijing Sinocleansky Technologies Corp.
Ulapha : Ikhaya>amandla>Ukuhamba noGcino lwe-CNG
Uxinzelelo oluphezulu lwe-jumbo-tube skid / trailer yenye yeebhubhu-ekhethekileyo esetyenziselwa ukugcina nokuhambisa i-CNG. Uyilo lwayo, ukuvelisa, ukuhlola kunye nokwamkelwa kwayo kufuneka kuhambelane ngokupheleleyo nale migangatho ilandelayo: I-ISO11120, i-DOT kunye ne-ASME, nengxelo yokuhlola (isatifikethi) ekhutshwe yi-BV, i-LRS, i-TUV okanye umntu wesithathu ofanayo. I-jumbo-tube skid / i-trailer ineemfanelo zesitora esikhulu sokugcina, ukusebenza ngempumelelo kwezinto zokuhamba kunye nokuhanjiswa ngokulula.
Uxinzelelo oluphezulu lwesilinda yejumbo lusetyenziswa kakhulu ekugcineni igesi kwimizi-mveliso, isikhululo se-CNG, ukuthuthwa, isityalo esivelisa amandla, umzi mveliso wefektri njl. Kuya kunciphisa ilahleko koxinzelelo kunye nokuvuza ngenxa yokuhamba umgama omde, ukonga amandla ngakumbi, uqoqosho ngakumbi ....
I-SinoCleansky CNG jumbo cylinder Cascade iveliswa ngokwe-ISO11120, DOT, okanye i-ASME, kunye nengxelo yokuhlola (isatifikethi) esikhutshwe yi-BV, LRS, TUV okanye iqela lesithathu elilinganayo lehlabathi ....
Ezi mveliso zisetyenziswa ngokubanzi ukugcinwa komhlaba kungaginyisi mathe kunye nokuhamba phakathi ...
Iimveliso ezinenzuzo yothutho lwangaphakathi lwe-CNG. Inemigangatho yesikhundla esikhulu sokugcina, ukusebenza ngokugqibeleleyo kwezothutho kunye nokuhanjiswa ngokulula ....
I-CNG cylinder cascade isetyenziswa ngokubanzi kwezothutho lwe-CNG. Ityiwa iqonga elifanelekileyo lokukhupha kwaye ulisebenzise ngokulula ....